[SirCulus] Dilkii Nabadoon Tarabi oo galay Xildhibaan Caddow Gees iyo Ganacsade Cali Abshir - waagacusub.com - iftineducation.com
[SirCulus] Dilkii Nabadoon Tarabi oo galay Xildhibaan Caddow Gees iyo Ganacsade Cali Abshir – waagacusub.com
aadan21 / November 6, 2016
iftineducation.com – Qaar ka mida Saraakiisha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Somalia oo codsaday inaan magacooda la shaacin xaalad amaan darteed ayaa ku xog waramay in dilkii Nabadoon Muxumud Tarabi ay maleegeen Xildhibaan Caddow Cali Gees iyo Ganacsade la saaxiiba oo lagu magacaabo Cali Abshir Xasan una dhashay beesha Aybakar Gaab Waceeysle.
Nabadoon Tarabi oo u dhashay beesha Waceeysle gaar ahaan Macalin dhiblaawe, Aybakar gaab, Aybakar gaab Macalin , Maxamed Aybakar Gaab .oo da’diisa lagu qiyaasay 90 sano jir ayaa lagu dilay Xaafadda Suuq Bacaad ee Magaaladda Muqdisho ,halkaas oo ay degan yihiin beesha uu ka dhashay xoogeeda.
Nabadoonka ayaa la dilay xilli uu ka soo baxay Masjid ku yaal Suuq bacaad maalin kadib markii uu hanjabaad kala kulmay Caddow Cali Gees iyo Cali Abshir sida ay eheladda Nabadoonka u xaqiijiyeen Waagacusub.
Nabadoon Muxumud Tarabi wuxuu ka mid ahaay Nabadoonaddii soo dhisay Galmudug,wuxuu lahaay Laba Xaas , reerka koowaad waxeey degan tahay Xarardheere , Reerka labaadna waxeey degan tahay Muqdisho gaar ahaan Warshadda dayactirka Isgaarsiinta oo kor ka xigta Jidka Warshadaha Muqdisho.
Amiirka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir Mr Cali Jabal ayaa iska fogeeyay dilka Nabadoon Tarabi ,wuxuuna yiri “Annagga hadaan dileeyno kuma sugneen suuq bacaad,wuxuuna deganaay Jidka Warshadaha i iyo degaan aan ku xoog badanahay boqolkiiba boqol oo ah Xarardheere, haddii aan nahay Mujaahidiinta Al-Shabaab ma dilno odayaasha ilaa aan digniin siino laakiin Nabadoon Tarabi allaha u naxariistee wax dimbiya nagama gelin”
“Nabadoon Tarabi wuxuu dacwad ka qoray Ergo uu qortay Caddow Cali Gees kuwaas oo been abuur ahaay ,uuna Caddow ku dulqoray Marooyin Waceeysle iyagoo la yaqaan ineysan dadkaas aheyn Marooyin iyo Aybakar Gaab midna” ayuu yiri Sarkaal ka tirsan hay’adda Sirdoonka NISA una dhashay beesha Waceeysle Abgaal.
Caddow Cali Gees oo ah ganacsade lacag badan heysta wuxuu doonayaa inuu mar labaad isu sharaxo kuna guuleeysto Xildhibaanka beesha Aybakar Gaab iyo Marooyinka laakiin Boqor Cabdullahi Geedi Shadoor ayaa gudbiyay liiska rasmiga ah ee ergadda Marooyinka. HALKAAN KA AKHRIYA LIISKA SAXDA AH EE MAROOYINKA.
“Nabadoon Muxumud Tarabi wuxuu warqad dacwadda u qoray guddigga doorashooyinka dadban iyo kuwa tooska ,isagoo u sheegay in dadkaas liiska lagu qoray laga been abuuray oo aysan aheyn beesha Marooyin iyo Aybakar Gaab sidaas darteedna aysan xaq u laheyn iney soo doortaan Xildhibaan metelaya Marooyin ama Aybakar Gaab” ayuu yiri Nabadoon u dhashay beesha Waceeysle oo codsaday inaan magaciisa la xusin.
Intaan la dilin Nabadoonka maalin ka hor waxaa gurigiisa ugu yeeray Ganacsade Caddow Cali Gees iyo Cali Abshir Xasan oo Nabadoonka la qabiil hoose ah ,una dhashay Maxamed Aybakar Gaab.
Labada Nin ayaa handaday Nabadoonka ,iyagoo ku yiri “Haddii aadan ka bixin waxa aad ku jirtid waad u dhimaneysaa”
Nabadoon Tarabi maalin kadib waa la dilay, Meeydkiisa waa la qaaday ,waxaana la geeyay Xarunta Nabadsugidda .
“Dilka Nabadoonka waxaa la qorsheeyay in su-aalo laga weeydiiyo Caddow Cali Gees iyo Cali Abshir Xasan laakiin maalmo kadib kiiskii waa la joojiyay oo waxaa dhacday in laaluush la siiyay Saraakiisha kiiska baaristiisa ku guda jiray” ayuu yiri Sarkaal ka tirsan Hay’adda NISA.
Taliyahii hore ee Nabadsugidda Somalia Cabdiraxman Tuuryare oo xilka Xildhibaanimadda kula tartamayay Caddow Cali Gees ayaa lagu qasbay inuu uga tanaasulo kadib markii uu cadaadis ku saaray Xasan Garguurte.
Caddow Cali Gees oo u dhashay beesha Macalin dhiblaawe, Aybakar Gaab Jufadda Cali Aybakar Gaab waa nin awood badan oo la tuhunsan yahay inuu ku lug lahaay weerarkii Diyaaradda Daallo, weerarkii lagu dhaawacay maareeyahii Garoonka Muqdisho Mr Cali Madoobe iyo dilkii loo geeystay Saraakiishii Saadaasha Hawadda Somalia.
Caddow Cali Gees oo ah Xildhibaan aan weligii ka qeybgelin kulamadda Baarlamaanka wuxuu leeyahay Shirkad lagu magacaabo Alpha Logistics ,wuxuuna heeystaa dhalashadda Mareykanka.
Caddow Cali Gaas wuxuu ku qaatay Baasaboorka Mareykanka magaca Naag la ilma adeera Ganacsade Cabdiraxman Jawaanle oo u dhashay beesha Majeerteen laakiin baaris Waagacusub sameeysay waxeey ku ogaatay inuusan Caddow Cali Gees marnaba guursan haweeneeydaas lagu magacaabo Safiyo Baseey oo degan hadda Emirate-ka Carabta.
Safiya Baseey waxaa qaba soddon sano ka badan nin lagu magacaabo Cabduqadir Nuuri oo ay shan Caruura u leedahay . iyadoo shanta Caruurta gabadha ugu yar tahay labaatan sano jir.
Kiiskaan wuxuu ka dhigan yahay inuu Caddow Cali Gees ku qaatay Baasaboorka Mareykanka hab been abuura iyo aroos aan jirin.iyadoo haddii Dowladda Mareykanka ogaatana lagala laaban doono dhalashadda sida uu dhigayo sharcigga Mareykanka.
Sikastaba ha ahaatee, Caddow Cali Gees oo aan la xiriirnay ayaa diiday inuu ka jawaabo eedeeymaha loo soo jeediyay oo dhan,wuxuuna markasta xaq u leeyahay inuu Waagacusub la hadlo si uu uga jawaabo kiiskaan lagu eedeeyay.
Kenya oo beenisay in ciidamadeeda ka faa’idaan dhuxusha Soomaaliya